जेठ २९, २०७५ मगलवार १६:४६:००
अभिनेता सञ्जय दत्तको जिवनीमा आधारित फिल्म 'सञ्जु'लार्इ लिएर बलिउड बजार गर्माएको छ । अभिनेता रणवीर कपुर दुरुस्तै सञ्जय दत्त देखिएर मात्रै होइन अभिनेत्री मनिषा कोइराला सञ्जयकी आमा नगरिस जस्तै देखिएकोमा पनि तारिफ भइरहेको छ। बहुप्रतिक्षित बनेको फिल्मले केही राज...
जेठ ६, २०७५ आइतवार १२:२३:०३
हाम्रो शरीर वाहिरवाट हेर्दा जस्तो देखिन्छ, भित्र त्यस्तो छैन । हामीले शरीरलाई एउटा ठोस आकारको देख्छौ र लिन्छौ तर शरीर भित्र अनगिन्ती कोषहरु, नसाहरु, रगतनलीहरु, मुटु, फोक्सो, कलेजो आदि धेरै अङ्गहरु छन भने टाउकोभित्र मष्तिस्क र यसका अनगिन्ती कोषहरु छन् । वैज्ञानिकहरु भन्छन ...
क्यान्सरको उपचार गराइरहेका अभिनेता इफरान खान दुर्इ महिनापछि सामाजिक सञ्जालमा
जेठ ४, २०७५ शुक्रवार १७:११:०९
काठमाडाैं– क्यान्सरको उपचार गराइरहेका भारतीय अभिनेता इरफान खान सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा २ महिनाको अन्तरालमा पुनः जोडिएका छन्। बुधबार खानले आफैले अभिनय गरेको नयाँ फिल्म ‘कारवाँ’लाई लिएर एक ट्विट गरेका हुन्। ट्विटमा उनले लेखेका छन्,‘स...
जेठ ३, २०७५ बिहिवार ०८:१८:५४
उच्च रक्त चाप अहिले धेरैमा देखिरहेको समस्या हो । विभिन्न कारणले गर्दा यो समस्या डरलाग्दो रुपमा बढ्न थालेको छ । यो बढ्नुको कारण मध्य एक खानपान र अर्को वर्तमान जीवनशैली हो । २०१६ मा नेपाल डेमोग्राफिक एन्ड हेल्थ सर्वेले पनि उच्च रक्तचाप नेपालीहरुका लागि चिन्ता ...
चैत २२, २०७४ बिहिवार १७:००:२५
एजेन्सी– बलिउडमा आकर्षक र सबैभन्दा फिट अभिनेत्रीमा करिना कपूरको नाम सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा छ । उनी फिटनेस, लुक्स र फेसनका लागि सधैं सजग रहन्छिन् । शैफ अलि खानसंग बिहे गर्नुअघि जिरो फिगरका लागि फिल्म उद्योगमा चर्चित थिइन्। बिहेपछि उनी आमा पनि बनिन् । तर त्यसप...
इन्डोक्राइन ट्युमर भएका इरफान खतरामुक्त रहेको चिकित्सकको दावी
चैत १०, २०७४ आइतवार ०१:३६:५३
नयाँदिल्ली– अभिनेता इरफान खानले केहि दिनअघि एक ट्विट गर्दै आफुलाई न्युरो इन्डोक्राइन ट्युमर भएको खुलाएका थिए। सो ट्विटमा उनले आफु विदेशमा गएर उपचार गर्ने पनि जनाएका थिए। त्यसको केहि दिनपछि मात्रै इरफान खानले लन्डनमा एक आयुर्वेदिक चिकित्सक बलेन्दु प्रकाशसँग उपचार...
आँखामा औषधि कसरी राख्ने ?
फागुन ३०, २०७४ बुधवार १७:३२:००
आँखा हाम्रो संवेदनशील अंगमध्ये पर्छ । त्यसैले यसको देखभालका क्रममा निकै होसियारी अपनाउनुपर्छ । साना गल्तीले पनि दृष्टि गुमाउनुपर्ने जोखिम हुन्छ । आँखाको उपचार वा सुरक्षाका क्रममा विभिन्न औषधि वा ड्रप प्रयोग गरिन्छ । ती प्रयोग गर्दा निम्न कुरामा सचेत रहनुपर्छ । औषधि राख्...
महिलालार्इ किन थाहा हुँदैन हर्टअट्याक ?
फागुन १६, २०७४ बुधवार १०:४४:००
एजेन्सी– ५५ वर्षभन्दा कम उमेरमा महिलाले कहिलेकाही हृदयाघातको लक्षण थाहा नपाउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै, हृदयाघात भएर अस्पताल भर्नामा भएकामध्ये पुरुषकोभन्दा महिलाको मृत्यु हुने सम्भावना बढी भएको पनि देखिएको छ। हृदयाघात भएर अस्पताल भर्न...
फागुन १४, २०७४ मगलवार ०१:३७:००
काठमाडौं– अभिनेत्री तथा फिल्म निर्माता निशा अधिकारी यतिबेला गर्भवती छिन्। गत असार १६ गते नेपाली क्रिकेटर शरद भेषवाकरसँग विवाह गरेकी निशाले पेटमा हुर्किरहेको बच्चाका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न भाव प्रस्तुत गरिरहेकी छिन्। सामान्यतया नेप...
घमौराले दिक्क बनाएको छ भने यसो गरौं
फागुन १४, २०७४ सोमवार १८:५९:३०
गर्मी धेरेलाई घमौराले सताउँछ । छाती, ढाँड र हातमा बढी घमौरा आउने गर्छ । जसले गर्दा पूरै शरीर नराम्रोसँग चिलाउने गर्छ । घरमै पनि घमौराको उपचार सम्भव छः – घमौरा भएकाले प्याज, लसुनले झानेको दाल खानु हुन्न । काँचो प्याज खानाले शरीर शीतल र...